16 Mgbe Devid gafetụrụ elu elu ugwu ahụ,+ Zaịba+ onye na-ejere Mefiboshet+ ozi bịara izute ya, ọ kpụkwa ịnyịnya ibu+ abụọ e dokwasịrị ihe e ji anọkwasị ha, ha bu narị ogbe achịcha abụọ+ na otu narị achịcha mkpụrụ vaịn a mịrị amị+ na otu narị mkpụrụ osisi na-amị n’oge okpomọkụ+ nakwa nnukwu ite mmanya.+
2 Eze wee jụọ Zaịba, sị: “Gịnị ka ihe ndị a i bu pụtara?”+ Zaịba wee zaa, sị: “Ịnyịnya ibu ndị a bụ nke ezinụlọ eze ga na-agba, achịcha ndị a na mkpụrụ osisi ndị a na-amị n’oge okpomọkụ bụ nke ụmụ okorobịa+ ga-eri, mmanya a bụ nke onye ike gwụrụ+ n’ala ịkpa.”+
3 Eze wee jụọ, sị: “Olee ebe nwa nna gị ukwu nọ?”+ Zaịba wee zaa eze, sị: “Ọ nọ na Jeruselem; n’ihi na ọ sịrị, ‘Taa, ụlọ Izrel ga-enyeghachi m ọchịchị nna m.’”+
4 Eze wee sị Zaịba: “Lee! Ihe niile bụ́ nke Mefiboshet bụzi nke gị.”+ Zaịba wee sị: “Ana m akpọrọ gị isiala.+ Ka ihe m dị gị mma, onyenwe m eze.”
5 Eze Devid wee bịaruo Bahurim,+ ma, lee! otu nwoke nke si n’ezinụlọ Sọl, aha ya bụ Shimiaị,+ nwa Gira, si n’ebe ahụ na-apụta, na-akpọ ya iyi ka ọ na-apụta.+
6 O wee malite ịtụ Devid na ndị niile na-ejere Eze Devid ozi nkume; mmadụ niile na ndị dike niile nọkwa ya n’aka nri na n’aka ekpe.
7 Nke a bụ ihe Shimiaị kwuru mgbe ọ na-akpọ ya iyi: “Pụọ ebe a, pụọ ebe a, gị nwoke ikpe ọbara mara+ na onye na-abaghị n’ihe!+
8 Jehova akwụwo gị ụgwọ ọbara dum nke ụlọ Sọl ị wụfuru, bụ́ onye ị na-achị dị ka eze n’ọnọdụ ya; Jehova na-enyekwa ọbụbụeze a n’aka nwa gị Absalọm. Lee, ọdachi adakwasịla gị, n’ihi na ị bụ nwoke ikpe ọbara mara!”+
9 N’ikpeazụ, Abishaị nwa Zeruya+ sịrị eze: “Gịnị mere nkịta a nwụrụ anwụ+ ga-eji na-akpọ onyenwe m eze iyi?+ Biko, ka m gaa gbupụ ya isi.”+
10 Ma eze sịrị: “Gịnị jikọrọ mụ na unu,+ ụmụ Zeruya?+ Ya kpọwa m iyi,+ n’ihi na Jehova asịwo ya,+ ‘Kpọọ Devid iyi!’ Ònyezi ga-asị, ‘Gịnị mere i ji mee otú ahụ?’”+
11 Devid wee gaa n’ihu ịgwa Abishaị na ndị niile na-ejere ya ozi, sị: “Lee, nwa m, onye si n’ahụ́ m pụta, na-achọ mkpụrụ obi m;+ ma ya fọdụzie onye ebo Benjamin!+ Hapụnụ ya ka ọ kpọwa m iyi, n’ihi na Jehova agwawo ya ka o mee otú ahụ!
12 Ma eleghị anya, Jehova ga-eji anya ya hụrụ,+ Jehova ga-enyeghachi m ihe ọma kama nkọcha ọ kọchara m taa.”+
13 Devid na ndị ikom ya wee na-aga n’okporo ụzọ ahụ, ma Shimiaị nọ na-aga n’akụkụ ugwu ahụ, na-aga n’akụkụ ya ka o wee na-akpọ ya iyi;+ ọ nọkwa na-atụ ya nkume ka ọ na-aga n’akụkụ ya, ọ bọkwara ya ájá nke ukwuu.+
14 N’ikpeazụ, eze na ndị niile ya na ha so bịarutere, ike gwụsịkwara ha. Ha wee tụrụ ndụ n’ebe ahụ.+
15 Ma Absalọm na mmadụ niile, bụ́ ndị ikom Izrel, banyere Jeruselem;+ Ahitofel+ sokwa ya.
16 O wee ruo na, ngwa ngwa Hushaị+ onye Akaịt,+ bụ́ enyi+ Devid, bịakwutere Absalọm, Hushaị sịrị Absalọm: “Eze, ị ga-adị ndụ!+ Eze, ị ga-adị ndụ!”
17 Absalọm wee jụọ Hushaị, sị: “Ọ̀ bụ ihe a bụ obiọma* ị na-egosi enyi gị? Gịnị mere i soghị enyi gị gawa?”+
18 Hushaị wee zaa, Absalọm, sị: “Ee e; kama onye Jehova na ìgwè mmadụ a nakwa ndị ikom niile nke Izrel họọrọ, nke ya ka m ga-abụ, m ga-esokwa ya nọrọ.
19 Ka m kwuokwa ya ọzọ, Ònye ka m ga-ejere ozi? Ọ́ bụghị nwa ya? Dị nnọọ ka m jere ozi n’ihu nna gị, otú ahụ ka m ga-eme n’ihu gị.”+
20 E mesịa, Absalọm sịrị Ahitofel: “Nyenụ m ndụmọdụ.+ Gịnị ka anyị ga-eme?”
21 Ahitofel wee sị Absalọm: “Dinaa ndị iko nna gị,+ bụ́ ndị ọ hapụrụ ka ha lekọtawa ụlọ.+ Izrel dum ga-anụkwa na i mewo onwe gị ka ị na-esi ísì ọjọọ+ n’ebe nna gị nọ,+ aka+ ndị niile dịnyeere gị ga-adịkwa ike.”
22 Ha wee maara Absalọm ụlọikwuu n’elu ụlọ.+ Absalọm wee malite idina ndị iko nna ya+ n’ihu Izrel dum.+
23 Ndụmọdụ Ahitofel, bụ́ ndị o nyere n’ụbọchị ndị ahụ, na-adị nnọọ ka mgbe mmadụ jụtara ihe ezi Chineke kwuru. Ọ bụ otú ahụ ka ndụmọdụ+ Ahitofel+ na-adị Devid na Absalọm.
^ 2Sa 16:17*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D10%26Chapter%3D16%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl